I-agate eluhlaza okwesibhakabhaka-Uhlaziyo olutsha ngo-2021 -Ividiyo emnandi
I-agle eluhlaza okwesibhakabhaka
I-lace ye-blue agate intsingiselo kunye nezibonelelo zeepropathi
Thenga i-agate yendalo eluhlaza okwesibhakabhaka kwivenkile yethu
Intsingiselo yeblue lace agate
Iipropati ze-agate zeblue
Izibonelelo zeblue lace agate
Yintoni i-agate eluhlaza okwesibhakabhaka ilungile?
Yeyiphi chakra i-lace lace agate enxulunyaniswa nayo?
Ngaba i-agate eluhlaza okwesibhakabhaka iyafana ne-blue lace agate?
Ngaba i-lace lace i-agate inqabile?
Ngaba ungalala nge-agate eluhlaza okwesibhakabhaka?
Ubeka phi i-agate eluhlaza okwesibhakabhaka?
Ungazi njani ukuba i-agate eluhlaza okwesibhakabhaka iyinyani?
Uyicoca njani i-agate ye-lace eluhlaza?
I-crystal yindidi ebonisa imodeli efana ne-lace kunye neefom ezinje ngamehlo, ii-swirls, iibhendi okanye i-zigzags, ukuba ezi zinto zibalulekile, ibizwa ngokuba yi-lattice agate. I-Crazy lace agate, efumaneka eMexico, ihlala inemibala eqaqambileyo kwaye ipatheni. Le agate ifumaneka e-Afrika kwaye inzima ngakumbi.
I-Polyateroid agate i-agate ekhulile kwisimo esisezantsi esinjenge-polyhedron. Xa lucwecwe, luvame ukubonisa uhlobo lwezinto eziphathekayo zeepoloni. I-polyhedroid agate icingelwa ukuba ifumaneka kuphela kwi-Paraíba State, eBrazil. Kuye kucetyiswa ukuba ukukhula akukona ukulawulwa kwe-crystallographically kodwa ngenxa yokuzaliswa kwezikhala phakathi kwama-crystals asele ekhona ngaphambili.
Faka iHolley blue agate, ikwabhale i-Holly blue agate, iribhoni emnyama enqabileyo ifunyenwe kufutshane naseHolley, Oregon, Lake Superior agate, carnelian agate, inee-hues ezibomvu, i-agate yase-Botswana, i-agume ye-plume, i-condor agate, i-agate ye-tube, kunye nokuhamba okubonakalayo amajelo okanye iityhubhu ezilingana nepini, iagate yokuqinisa.
Ngokwahlula kweebhendi ezixineneyo ezikhumbuza imijelo yokuzikhusela kunye neendonga ezijikeleze iinqaba zamandulo IBinghamite, Iintlobo ezahlukeneyo ezifumaneka kuphela eMontana, umlilo agate, obonisa ukukhanya kwangaphakathi okanye umlilo, isiphumo se-agate ecacileyo ngaphezulu komaleko we-hematite e-hydrothermally ebekwe, kunye nelitye le-Patuxent River, ifom ye-agate ebomvu nephuzi efumaneka kuphela eMaryland, iphi imeko yelizwe.
I-Agate luhlobo lwe-cryptocrystalline ye-silica, ikakhulu i-chalcedony, ebonakaliswa kukucoceka kwengqolowa kunye nokukhanya kombala. Nangona ii-agate zinokufumaneka kwiintlobo ezahlukeneyo zerwala, zinxulunyaniswa namatye e-volcanic kwaye zinokuthi ziqheleke kumatye athile e-metamorphic.
I-Agate yenye yezinto eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ubugcisa bombhalo onzima, kwaye sele ifunyenwe kwiindawo ezininzi zasendulo, ezibonisa ukusetyenziswa kwayo kwihlabathi la mandulo, umzekelo, ukubuyiswa kwezinto zakudala kwi-Knossos indawo eKrethe kubonisa indima yayo Ngenkcubeko yeBronze Age Minoan.
Ilitye linxulunyaniswa noxinzelelo loxinzelelo. Yikristale yokuthomalalisa ingqondo egqithisileyo kunye nokuthomalalisa imithambo-luvo. Ngokufana nefuthe lokujonga esibhakabhakeni esiluhlaza okwesibhakabhaka esilulela phezulu, ilitye sesona sixhobo silungileyo sokuphumla kunye nokugcina imeko ezolileyo. Tsalela umnxeba kweli litye liyimfuneko yemihla ngemihla ye-vibes ezakhayo, elona nyango lilungileyo kuxinzelelo kubomi bethu obuxakekileyo.
Eli litye lilitye elikhulu lokondla kunye nelokuxhasa, ukuthomalalisa umsindo, usulelo, ukudumba kunye nomkhuhlane. Kuyanceda ukomeleza nokukhawulezisa ukulungiswa kwamathambo, ukusilela kwe-thyroid, usulelo lomqala kunye nolwe-lymph.
Eli litye ligugu lijongwa njengekhoyile yomqala, iyasebenza ukuvula ii-chakras ezisuka entliziyweni yethu ukuya kwisithsaba sokufumana uthando olungenamiqathango, oluvela kwi-Divine, kwabanye, nakuthi, kwaye sithathe indawo yoloyiko, umsindo, unxunguphalo nobukrakra. ngeemvakalelo zovuyo, kunye nethemba.
Amagama atshintshanayo odidi olufanayo lwekhalcedony eboshiweyo yosapho lwe-quartz lwe-microcrystalline
Luhlobo olunqabileyo lweagate kwaye, ewe, luluhlu olunzulu kakhulu lweekristal. Amatye anqabileyo akumgangatho ophezulu avela kuphela eNamibia naseMzantsi Afrika, kunye nediphozithi encinci eyongezelelweyo ebekwe eRomania.
Iingcali zokuphilisa amatye zikholelwa ukuba eli litye likhuthaza inkuthazo kunye nokuhamba kwamandla aqinisekileyo. Ngokuyongeza kwingqokelela yamatye okulala, umntu unokuzuza ngengqondo ezolileyo.
Yibeke kwicala lasempuma lekhaya lakho ukuze ube sempilweni, kwaye kwicala lasempuma mpuma lobutyebi nobuninzi. Yibeke kwindawo esemaZantsi mpuma ngethamsanqa kuthando nakumtshato.
Yiva nge-wax okanye i-glassy texture ngaphakathi kwelitye. Ukuba ungaqhekeza uvule isampulu yakho ngesando kunye ne-chisel, okanye ukuba sele yaphukile, gcoba umnwe wakho ngaphakathi kwelitye apho kukho imibala yemibala. I-agate kufuneka izive ilungile okanye ifana neglasi.
Eyona ndlela yokucoca amatye anqabileyo kukusebenzisa amanzi anesepha kunye nelaphu elithambileyo. Qiniseka ukuba uhlambulule kakuhle ukususa intsalela yesepha.
I-agate yendalo eluhlaza okwesibhakabhaka iyathengiswa kwivenkile yethu yegem
Senza isiko lobucwebe begalati eluhlaza okwesibhakabhaka njengamakhonkco okuzibandakanya, izacholo zomqala, amacici e-stud, izacholo, namacici… Nceda Qhagamshelana nathi ngesicatshulwa.
I-wax ye-agate eluhlaza okwesibhakabhaka i-7.47 ct
I-wax ye-agate eluhlaza okwesibhakabhaka i-7.06 ct
I-wax ye-agate eluhlaza okwesibhakabhaka i-8.74 ct
I-wax ye-agate eluhlaza okwesibhakabhaka i-10.64 ct
I-wax ye-agate eluhlaza okwesibhakabhaka i-8.81 ct
I-wax ye-agate eluhlaza okwesibhakabhaka i-6.45 ct
I-wax ye-agate eluhlaza okwesibhakabhaka i-8.66 ct
I-wax ye-agate eluhlaza okwesibhakabhaka i-8.73 ct